Linux 5.0: Linus Torvalds inozivisa sezvazvinotarisirwa | Linux Vakapindwa muropa
Linus Torvalds inozivisa Linux vhezheni 5.0, tichisiya iro 4.x bazi rave pakati pedu kubvira kusvetuka kubva pa3x kusvika pa4. Sezvaunoziva, shanduro idzi hadziteedzere kurongeka kunonzwisisika semamwe mapurojekiti, uye pazvinokodzera Linus, anozvitumidza zita uye otanga kukura pasi pezita nyowani kuti arege kuwedzera huwandu hwekukanganisa hwakareba. Kazhinji hazvidarike makumi maviri kuitira kuti usave nenhamba dzakanyanya.
Naizvozvo, iyi 2019 nyowani inotivigirawo kusvetukira kuLinux 5.x kusiyira kumashure nhamba 4. Hazvishamise kana zvitsva, sezvo Linus akazivisa kuti kusvetuka uku kuchaitwa munguva pfupi, uye sekuronga, hakuzovi neLinux vhezheni 4.21. Kunyangwe akawanda mablog uye mapeji vakafungidzira kuti vhezheni 4.21 yaizouya, sezvaungaona kana iwe ukatsvaga muGoogle, uchizivisa kugadzirisa uye nhau dzeiyo vhezheni iyo isipo ...
Gore Idzva Hupenyu Hutsva, sezvavanotaura. Uye vagadziri vachasiya kumashure nhamba ina kuti vagadzire nzira yechishanu. Izvi hazvireve shanduko yemushandisi wekupedzisira, nekuti budiriro ichaenderera samazuva ese, pasina zviitiko zvikuru kana kusvetuka, nhanho nhanho, sezviri kuitwa izvozvi. Chinhu chega chatinofanira kujairira neiyo nyowani nhamba.
Munozviziva izvozvo Linux 4.21 RC1 iri kuvandudzwa yakapihwa zita rekuti Linux 5.0 RC1. Sezvo Linus akataura zvakanaka "Kana iwe uchida chikonzero chepamutemo, ndakapera minwe kuverenga, saka 4.21 yakava 5.0", akadaro musiki iyeye muLKML. Sezvaanenge aratidzawo, hazvina kuitirwa mamirioni ezvinhu muGit sezvazvaiitwa kana kufungidzirwa kare, uye hapana hukuru hwekuvandudza kana shanduko yekupa zita iri. Zvese zvinhu zvakajairika ... iine 50% yevatyairi, 10% yekodhi yezvivakwa, uye iyo yasara makumi maviri muzana ezvinyorwa, network, mafaira masisitimu, misoro inogadziridza, kernel kodhi saizvozvo,
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » GNU/Linux » Kernel » Linux 5.0: Linus Torvalds inozivisa sezvazvinotarisirwa
Inogona here Microsoft kuburitsa kugoverwa kweLinux?